Hafanàm-po nomerika · Janoary, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Janoary 2012
Madagasikara: Tsy Navela Hody Ny Filoha Teo Aloha Ravalomanana
Afrika Mainty 26 Janoary 2012
Nanambara ny hodiany an-tanindrazana, rehefa nanao sesintany ny tenany efa ho telo taona, tany Afrika Atsimo, ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ny 21 Janoary 21, nitaintaina ny tao an-drenivohitra miandry ny fiverenany fa an'arivony ny olona no eny an-dalana mankany an-tseranana. Saingy minitra vitsy taoriany ny nidirany ny faritr'habakabaka malagasy dia nilazana mba hivily lalana ny voromby ka higadona any an-tanàna hafa. Mitantara mivantana ity toe-draharaha mafampana ity ny Malagasy.
Tolo-dalàna Amerikana Mety Hampihorohoro Ny Aterineto Erantany
Etazonia 19 Janoary 2012
Tsy ijeren-dry zareo izay fampitandreman'ny vahoaka sy ireo mpahay teknolojia, fa ireo mpanao lalàna ao Etazonia dia naminavina tolo-dalàna roa, ny Stop Online Piracy Act (SOPA) sy ny Protect IP Act (PIPA), izay tena fampihorohoroana marina sy tena zava-doza ho an'ny fisofakan'ny aterineto manerana izao tontolo izao. Ho setrin'izany, ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices dia nanapa-kevitra nanatevin-daharana ireo vohikala toy ny Wikipedia, Reddit sy BoingBoing amin'ny “mandeha maizina” ka hanamainty ny pejy fandraisan'ny vohikala Global Voices Advocacy mandritra ny ora 12 ny 18 Janoary, sady hamoaka sary famantarana amin'ireo vohikala hafa ao amin'ny Global Voices izay manome fampahafantarana misimisy kokoa mikasika ilay tolo-dalàna.